महिलाको योनी छेदन गर्ने अनौठो परम्परा – कामना डेली
महिलाको योनी छेदन गर्ने अनौठो परम्परा
प्रकाशित मिति २०७५ आश्विन ३१, बुधबार ००:१० पछिल्लो अपडेट मिति Nov 3, 2018
महिलाको योनि छेदन गर्ने एक निर्दयी संस्कारलाई कानूनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएपनि अझै पनि विश्वका कतिपय देशहरुमा यो प्रचलन कायमै रहेको छ । भारतको एउटा सानो बोहरा मुस्लिम समुदायमा यो कुप्रथा अझै पनि विद्यमान छ । बोहरा समुदायका महिलाहरुले स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस कुसस्कारलाई हटाउन विभिन्न अभियान चालेका छन, तथापी यस कुप्रथामा कुनै कमि आएको छैन् । जसका कारण अधिकांश महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ ।
मासुमा रानालभी सात वर्षकी हुँदा उनकी हजुरअमाले आइसक्रिम र चकलेट किनिदिने प्रलोभन देखाएर घर बाहिर लैजान्छिन् । चकलेट खाने भन्दा उनीमा गदगद हुन्छिन् । ‘म निकै खुसी थिए । तसर्थ उनीसँगै म हिडें,’ उनी स्मरण गर्छिन् । उनीहरुले मेरो योनी तन्काएर केही चिज काटे । मलाई खपिनसक्नु पिडा भयो । डरले चिच्चाए । त्यसपछि उनीहरुले काटेको ठाँउमा केही कालो पाउडर छर्किदिए ।
‘हजुरआमाले मलाई एउटा पुरानो र जीर्ण भवनमा पु¥याएपछि भने मेरो मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि उनले मलाई एउटा कोठामा लगिन् । मलाई भुइँमा ओछ्याइएको एउटा कार्पेटमा बस्न लगाइयो । तत्कालै मेरो पाइन्ट खोलियो,’ सो घटनाबारे उनी बेलिबिस्तार लगाउछिन्, ‘उनले मेरो हात समाईन भने अर्की महिलाले खुट्टा । त्यपछि उनीहरुले मेरो योनी तन्काएर केही चिज काटे । मलाई खपिनसक्नु पिडा भयो । डरले चिच्चाए । त्यसपछि उनीहरुले काटेको ठाँउमा केही कालो पाउडर छर्किदिए । पाइन्ट लगाइदिए र हजुआमाले मलाई घर लगिन् । ’
छेदनको कुनै चिकित्सकीय कारण छैन् । रानालभीका अनुसार यो संस्कार पूर्ण रुपमा पितृसतात्मक सोचमा आधारित छ । योनिच्छेद गरेपछि महिलाको यौन शक्ति घट्ने र बाहिर केटासँग बरालिंदै नहिड्ने तथा आफ्नो श्रीमानसँग मात्र भक्त भइन्छ भन्ने विश्वासमा यो कुसस्कारले जरा गाडेको उनको भनाई छ । ‘महिलाको यौन इच्छा नियन्त्रण गर्नु र उनलाई यौन कार्यमा कम आनन्ददायी बनाउनु यसको मुख्य उदेश्य हो,’ उनी भन्छिन् । कुनैबेला अफ्रिका र मध्येपूर्वका विभिन्न देशहरुमा एफएमजी गरिन्थ्यो । तर, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकामा भने यसलाई निकै गोप्य रुपमा राखियो । यो प्रथा इन्डोनेसियामा अझै पनि विद्यमान रहेको बताइन्छ ।
एफजीएमले दीर्धकालिन अशर गर्ने बताइन्छ । यसले मनोवैज्ञानिक र यौनको दृष्टिले समेत हानी गर्ने विज्ञहरु बताउछन् । ‘क्लिनिकल्ली निपूर्ण व्यक्तिले यो कार्य नगर्ने हुँदा विभिन्न समस्या आउने गरेका छ । एफजीएम गर्दा गर्र्दै कतिपय बालिकाको मृत्यु समेत भएको छ,’ इन्साफले भनिन् । केही वर्ष अगाडि बोहराको उच्च धार्मिक नेता साइड्ना मोहमद बुरहनुद्दिनलाई एफजीएम प्रतिबन्ध गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सो लिखित आग्रहलाई डस्टबिनमा फालिएको उनी बताउँछिन् । ‘महिलाले हाम्रो धर्मलाई विना तर्क पालना गर्नपर्छ,’ सो समुदायका प्रवक्ता भन्छन् ।
योनीछेदन विधि विभिन्न जातीय समूहहरुबीच फरक फरक हुन्छ । जस्तैः योनीको भंगाकुर पत्र र मुन्डलाई हटाइन्छ भने कुनै समुदायले योनी मुखको भित्रि भोगस्ठ (लेबिया) लाई हटाउछन् । मुत्र निकास हुन र मासिक धर्मको समयमा अबरोध नहोस भनेर सानो द्वार राखिएको हुन्छ । सहबास र बच्चा जन्माउँदा योनी आफै खुल्ने बताइन्छ । यस पक्रियाले योनीमा संक्रमण, दीर्घकालिन पीडा र बच्चा जन्माउदा समस्या हुने बताइन्छ । चिकित्सा विज्ञानमा अहिलेसम्म यसको कुनै फाइदा उल्लेख गरिएको छैन ।
वि.सं. २०७५ आश्विन ३१ गते बुधबार तदनुसार ई. सं. २०१८ अक्टोबर १७ तारिख
आज महाअष्टमी र कालरात्रि मनाइँदै